ဗမာတွေဟာ…တိုင်းရင်းသားတွေကို တောင်းပန်သင့်ပါတယ်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ဗမာတွေဟာ…တိုင်းရင်းသားတွေကို တောင်းပန်သင့်ပါတယ်။	13
Posted by garuda on May 28, 2016 in Creative Writing | 13 comments
အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပါနော် ;)
View all posts by garuda →	Blog
ခင်ဇော် says: ဟယ်
ရောက်ရာ အရပ် က ပြေးးလာကြိုရဒါ..
ရာမည says: ကျွန်​​တော်​ ခင်​ဗျားကို​မျှော်​​နေပါတယ်​ဗျာ ​​ကော်​ပီ​ပေ့စ်​ကြီးပြင်​​ပေးပါဦးခင်​ဗျာ
kai says: ဘယ်ဂသူတွေထွက်လာပါလိမ့်…
ဖြစ်ရမယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: သကခ က ရခိုင်စပ် တဲ့
အဘဖ က ကချင်စပ် တဲ့
ဥကက က ကရင်စပ် တဲ့
စလက က မွန်စပ် တဲ့
ကရစ က ချင်းစပ် တဲ့
ဇဇခဇ က ဝစပ် တဲ့
သနအ က ကယားစပ် တဲ့
အရလ က ရှမ်းစပ် တဲ့
ဒါထက် – ဂရဒ နဲ့ ရမည က ဗမာ တွေ ထင်ရဲ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3552
ဦးဦးပါလေရာ says: ဘာအတွက် တောင်းပန်သင့်တာလဲမသိဘူးနော်..
တောင်းပန်လို့ အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် တောင်းပန်သင့်ပါတယ်
ဒါမှမကလို့ ထိုင်ရှိခိုးမှ အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် ထိုင်ရှိခိုးသင့်ပါတယ်
မေ့စရာတွေ မေ့ထားမှ အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်လဲ မေ့ထားသင့်ပါတယ်…
sorrow says: ..ဟင့်အင်း..မတောင်းပန်နဲ့..မေ့ထားတယ်….နိုင်ငံတော်ဘာသာကြီးဆိုတာပဲ ထပ်မလုပ်အောင်တားပေး…..ကြောက်လို့.. ဒီမိုခောတ်မှာတောင်… တခြမ်း..တခြမ်းပါနေပြီ…
kai says: မြန်မာပြည်မယ်… ကျေးဇူးတော်နေ့လုပ်သင့်တယ်..
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ဆိုင်းမဆင့်ဗုံမဆင့်ပါလား…အင်း…မဟုတ်တာလုပ်လိုက်…တောင်းပန်လိုက်..မဟုတ်တာထပ်လုပ်လိုက်..
…ဆိုတော့လည်း..မနိပ်သေးပါဘူးဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6348
ဂျစ်စူ says: ဟတ်ဂဲ့
kai says: ဖွင့်ဟတောင်းပန်တာရဲ့အဓိပ္ပါယ်အစစ်မှာ.. နောင်ထပ်မလုပ်ဖူးဆိုတဲ့.. ခံဝန်ချက်တွဲပါပါတယ်..။
ကမ္ဘာမှာ.. စနစ်တကျ..ဖွင့်ဟတောင်းပန်နည်းကို.. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၂၆၀၀လောက်က…ဗုဒ္ဓစခဲ့တယ်လို့ယူဆမိတယ်…။
၀ိနည်းမှာ.. အာပါတ်ဖြေတယ်ဆိုတာ… အဲဒါပဲ..။
ခရစ်ယန်မှာကျ.. Confess လုပ်တာပဲ…။
ဒီလိုနဲ့.. ခရစ်ယန်နိုင်ငံတွေ.. တိုးတက်အောင်မြင်ခဲ့ကြတယ်..။
လူသားဆန်မှုရဲ့.. အဓိကအကျဆုံး… တခု..။
သံဃာချင်း ဒေသနာကြား (အာပတ်ဖြေ) ပုံ
”သင်တို့ ဘုရားမနှစ်သက်တာ လုပ်လျှင် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ရမည်”
ရဟန်းငယ်က ရဟန်းကြီးထံ ဒေသနာကြားပုံ
အငယ်။ ။ အဟံ ဘန္တေ သဗ္ဗာ အာပတ္တိယော အာဝိကရောမိ။
အရှင်ဘုရား တပည့်တော်သင့်ရောက်သော အာပတ်အားလုံးကို ထင်စွာပြုပါ၏။
အကြီး။ ။ သာဓု သာဓု သာဓု။
ကောင်းပြီ ကောင်းပြီ ကောင်းပြီ။
အငယ်။ ။ အဟံ ဘန္တေ သမ္ဗဟုလာ နာနာဝတ္ထုကာ သဗ္ဗာ အာပတ္တိယော အာပဇ္ဇိံ၊ တာ တုမှမူလေ ပတိဒေသေမိ။
တပည့်တော်သည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိသော အာပတ်အားလုံးကို သင့်ရောက်ခဲ့ ပါပြီ၊ ထိုအာပတ်အားလုံးကို အရှင်ဘုရားထံ၌ ပြောကြားပါ၏။
အကြီး။ ။ ပဿသိ အာဝုသော တာ အာပတ္တိယော။
ငါ့ရှင် ထိုအာပတ်အားလုံးကို အပြစ်ဟုရှုပါ၏လော။
အငယ်။ ။ အာမ ဘန္တေ ပဿာမိ။
အကြီး။ ။ အာယတိံ အာဝုသော သံဝရေယျာသိ။
အငယ်။ ။ သာဓု သုဋ္ဌု ဘန္တေ သံဝရိဿာမိ။
အောင် မိုးသူ says: အဲ့ဒါလည်းပို့စ်တစ်ခုပေါ့။ မိုက်တယ်။
လုံမလေးမွန်မွန် says: အဘဖ ရေးတာများလားလို့… ဟိ.. မန့်တွေဖတ်ပြီး ပြန်ထွက်သွားသည်
Thint Aye Yeik says: အဲ့လောက် စာများတဲ့ ပိုစ်အရှည်ကြီးကျတော့
ဆယ်ရက်လောက် အချိန်ယူ ဖတ်လိုက်ရတယ်။
ဖတ်ပြီး ဘာမန့်ရမှန်းလည်း မသိဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ . .
ဘယ်သူတွေက . . .
ဘယ်သူတွေကို . . .
ဘယ်တုန်းက . . .
ဘယ်နေရာမှာ . . .
ဘာလုပ်ခဲ့လို့ . . .
ဘယ်လို တောင်းပန်သင့်တာလဲဆိုတာ . . .
ဘာမှ သေချာတိကျအောင် ရေးမထားလို့
ဘာမှ မပြောပဲ ပြန်ထွက်သွားပါကြောင်းးး